Miaraka amin’ny lehilahy sy vehivavy manolo-tena
"Fa hevero ny fiantsoana anareo, ry rahalahy, fa tsy firy no olon-kendry araka ny nofo, tsy firy no olona mahery, tsy firy no avo razana" —1 Kor 1:26.
Tsy ny rehetra no afaka misahana toerana mitovy; kanefa izay manolo-tena manaiky hiasan'ny Fanahy Masina dia ho eo ambony fifehezan'i Kristy, ary manomana lehilahy sy vehivavy manolo-tena Andriamanitra. Hanefa ny asany amin'ny alalan'ny fomba sy fitaovana maro samihafa Izy. Tsy izay manan-talenta indrindra ihany, na ireo izay miandraikitra toerana ambony, na manana fari-pahaizana ambony no hampiasain'ny Tompo amin'ny asa famonjem-panahy. Hampiasa olona maro izay tsy dia nanana izany tombontsoa izany Izy. Fa amin'ny alalan'ny fampiasany fitaovana tsotra no hitaomany ireo manana fananam-be sy tany handray ny finoana ny fahamarinana; ary lasa tanan'Andriamanitra mahavonjy ho fampandrosoana ny asany izy ireo. Tsy ny talenta mamiratra mandrakariva no hahavita be ho an'Andriamanitra. Afaka miteny amin'ny alalan'ny olona izay manolo-tena ho an'ny asany Izy.
Raha manana ny Fanahin'ny hafatra izay mitaona ny fanahy hisafidy ny fiainana sy fahafatesana isika, dia hahita asa vita tsy mbola nofinofisintsika mihitsy isika. Raha avela hambabo ny lehilahy sy vehivavy, tanora sy antitra ny fanahy tia asa misionera, dia hahita olona maro handeha ho eny amin'ny lalambe sy ny sisim-boly, ka hanery ny olona tso-po hiditra.
Aoka ireo izay miasa ho famonjem-panahy hahatsiaro fa manolo-terra hiara-hiasa amin'i Kristy izy ireo, hankato ny fitarihany, ary hanaraka ny tari-dalany. Tokony hangataka sy handray isan'andro ny hery avy any ambony izy ireo. Tokony hankamamy ny fahatsapana tsy tapaka ny fitiavan'ny Mpamonjy, ny fahombiazany, ny fiahiany ary ny fahamoram-panahiny izy ireo. Tokony hijery Azy toy ny mpiandry sy mpiahy ny fanahiny izy ireo. Noho izany dia hahazo fangorahana sy fanampiana avy amin'ireo anjelin'ny lanitra izy ireo. Ho fifaliany sy satroboninahitry ny fifaliany i Kristy. Koa hofehezin'ny Fanahy Masina ny fony. Handeha hitafy zotom-po masina izy ireo, ary homban'ny hery mifanaraka amin'ny halehibiazan'ny hafatra toriny ny ezaka ataon'izy ireo. — RH, 27 Oktobra 1910.